Nutska | December 2019
Ugu Weyn Ee Nutska
Sidee loo adeegsan karaa lowska?
Qof kastaa wuu ogyahay faa'iidooyinka miraha la qalajiyey iyo lowska. Laakiin xitaa meelaha banaani waa badeecooyinka ugu qiimaha badan, taas oo macnaheedu yahay fiitamiinnada iyo xayawaanka waxtar leh. Ku saabsan mid ka mid ah miraha kuwan ka mid ah ayaa looga doodi doonaa dib u eegista. Waxaan ka bartay wax badan oo ku saabsan burqan lawska, faa'iidadooda iyo waxyeellada suurtagalka ah. Waxyaalaha kalooriga ah iyo walxaha kiimikada. Kuwaas waxaa loo tixgeliyaa shey aad u sarreeya - 100 g oo ah goosashada cusub 673 kcal ayaa ku jira.
Sida loo nadiifiyo qumbaha
Waxay sii kordhinaysaa, hoogaamiyeyaasha casriga ah waxay isticmaalaan waxyaabo aan caadi ahayn iyo xitaa qalaad oo la cuno, oo xitaa haddii aanad qofna la yaabin mashiinka lakabka, qumbaha weli waxaa loo tixgelin karaa wax yaab leh. Inkasta oo xaqiiqda ah in nuugaan waaweyn oo si sahlan loo heli karo suuqa bilaashka ah, dhammaan dadka iibsadaa ma yaqaanaan sida loo doorto una furo si sax ah, waxaana jira siyaabo badan.
In badan oo ka badan hal mar ayaa la kulmay magac sida guarana, iyada oo qayb ka ah hababka kala duwan ee lumista miisaanka ama kicinta nidaamka dareenka. Hoos ka mid ah magaca midabka leh oo aan la fahmi karin ayaa ah meel qurux badan oo aad u xiiso badan oo la isku qurxiyo. Laakiin muuqaalka kala-duwan ee ay ka mid ahayd ma aha oo kaliya muuqaal muuqaal ah, laakiin sidoo kale guryaha faa'iido leh, kuwaas oo aad u badan.
Coconut: imisa kalori, waxa faa'iido leh, sida loo doorto oo loo furo, waxa la isku daro
Coconut waa raaxeysiga kulaylaha, taas oo caan ku ah guryaha nafaqada, dhadhanka gaarka ah iyo faa'iidooyinka jirka oo idil. Miro, kaas oo ku kora xeebaha kulaylka kulul, si wax ku ool ah ayaa loo adeegsadaa qaybo badan oo ka mid ah hawlaha bani-aadmiga - waxaan tixgelin doonaa sifooyinka ku jira qodobkan.
https://lezgka.ru so.lezgka.ru © Nutska 2019